हेलम्बुलाई स्याउको गाउँ बनाइने - १९ कार्तिक २०७७, NepalTimes
१९ कार्तिक २०७७
१९ कात्तिक, सिन्धुपाल्चोक ।
हेलम्बुलाई स्याउको गाउँ बनाइने भएको छ । करीब ३७ वर्षपछि सिन्धुपाल्चोकको पर्यटकीय गाउँ हेलम्बुमा फेरि स्याउ फल्न थालेपछि हेलम्बु पुनः स्याउको गाउँ बनाउन स्थानीय जुटेका छन् ।
वि. सं. २०४० सालपछि स्याउ फल्न छाडेको र रोग लागेपछि स्याउका रूख नै काटिएको थियो । अहिले हेलम्बुलाई फेरि स्याउको गाउँ बनाउन स्थानीय युवाहरू जुटेका छन् । स्याउ फल्न शुरू गरेको पहिलो वर्षमै ३०० किलो भन्दा बढी स्याउ बजारमा बेचिसकेको स्थानीय रेन्जेन ह्योल्मोले बताए। हेलम्बु क्षेत्रमा वर्षा भइरहने र बढी चिसो हुने भएका कारण स्याउ मीठो हुने पनि उनले बताए ।
स्याउकै कारण हेलम्बुको पहिचान भएको र त्यसलाई गुम्न नदिने अठोटका साथ फेरि खेती शुरू गरेको पेमाल्हामु शेर्पाले बताए। स्याउ फल्न शुरू गरेकाले अब स्थानीय सरकारले बजार र प्राविधिकको प्रबन्ध गर्नुपर्ने किसानहरूको भनाइ छ ।
नेपाल मात्रै नभइ भारत र तेस्रो मुलुकमा समेत चर्चा कमाएको हेलम्बुको स्याउ पहिलेजस्तै फेरि लटरम्मै फलाउन र हेलम्बुलाई चिनाउन सबै गाउँमा स्याउका बिरुवा रोपिएको छ ।
हेलम्बु मात्र होइन अहिले यस क्षेत्रका मनोरम गाउँ किउल, बरुवा र बाँसखर्कका हिमाली गाउँमा पनि स्याउ खेती शुरू गरिएको छ ।
बजार नभएकाले पहिले उत्पादन गरिएको स्याउ किसानले गाईवस्तुलाई खुवाउने गरेका थिए । गाउँपालिकाले पनि स्याउ उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई विशेष सहुलियत दिने र हेलम्बुलाई स्याउको गाउँ बनाउने लक्ष्य राखेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले बताए ।
मनाङ एग्रोबाट बिरुवा ल्याएर परीक्षण गरिएकोमा राम्रो उत्पादन भएका कारण अब अन्य ठाँउमा पनि लगाइने गाँउपालिकाले बताएको छ ।
निर्वाचनमा हुने खर्चलाई फजुल खर्च नभनौंः अर्थमन्त्री
प्रचण्डले आरोप पत्र फिर्ता लिए नेकपा मिल्न सक्छः ईश्वर पोखरेल
सरकारविरुद्ध नागरिक अगुवाको मार्चपासमा प्रहरीको हस्तक्षेप (फाेटाे फिचरसहित)
प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन सभामुखलाई दबाब
अब तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो : पत्रकार वाग्ले
माघ २३ मा ओली समूहले जनसभा गर्ने
आज ३३९ संक्रमित थपिँदा ४०१ डिस्चार्ज, थप १० जनाको मृत्यु
ओलीको चुनाव गराउने इच्छा छैन्, उनी सत्तामा बसिरहन चाहन्छन्ः माधव नेपाल
कल्याण सेक्युरिटी सर्भिसमा छापा, अवैध रुपमा कतार प्रहरीमा लैजान अन्तरवार्ता लिएको आशंकामा